खुशी रहनका लागि बाइबलीय सूत्र : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
खुशी रहनका लागि बाइबलीय सूत्र
[0] October 30, 2016	| Sarju Rijal
आइतवार, अक्टोबर ३०, कार्तिक १४
‘समय र मौका नै तिनीहरू सबैले पाउँछन्।’ —उपदेशक ९:११
के तपाईं त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई स्पष्ट उत्तरहरू चाहिन्छ र जसले अस्पष्टता सहन सक्दैन ? तर सत्य कुरा के हो भने, यस संसारमा घट्ने धेरै कुराहरूको बारेमा हामीसँग उत्तर हुँदैन। हामीले संघर्ष गर्ने धेरै विषयहरूमा परमेश्वरले यस्तो छाप लगाएर बन्द गर्नुभएको हुन्छः ‘पछि व्याख्या गर्नेछु !’ आधुनिक विज्ञानले हामीलाई यो कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छ कि पर्याप्त समय दिएमा सबै कुरा ठोस, सटिक, नाप्न सकिने, र प्रमाणित गर्न सकिने छ। तर हामीले पत्ता लगाएका छौं कि कुरा त्यस्तो होइन।
उदाहरणका लागि, किन कुनै परिवारमा दुःख आइपर्छ तर अर्कोमा पर्दैन ? किन ‘धनीहरूले’ हरेक दिन ‘गरिबहरूलाई’ खान पुग्नेभन्दा बढी खाना खेर फाल्छन् ? जवान र निर्दोष मानिसहरू किन मर्छन् ? तपाईंले यस्ता प्रश्नहरूका बारेमा विचार गर्दागर्दै पागल बन्न सक्नुहुन्छ र पनि उत्तर भेट्टाउन सक्नुहुन्न।
बाइबलले भन्दछः ‘आफ्नो खाने कुरा आनन्दसँग खाऊ, खुशी मनले आफ्नो दाखमद्य पिऊ, किनभने तिमीले गरेको काममा अहिले परमेश्वरको निगाह रहेको छ … आफूले प्रेम गरेकी पत्नीसँग जीवनको सुख–भोग गर … तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो पूरा शक्तिले गर … चाँडो दगुर्नेले दौड जित्दैन, न शक्तिशालीले युद्ध जित्छ, नता बुद्धिमान्लाई भोजन आउँछ, न तीव्र ज्ञानीलाई धन–सम्पत्ति आउँछ, वा न त पढेकाले निगाह प्राप्त गर्छ। तर समय र मौका नै तिनीहरू सबैले पाउँछन्। त्यसबाहेक आफ्नो काल कहिले आउँछ भनी कुनै मानिसले जान्दैन। माछा निर्दयी जालमा र चरा पासोमा परेझैँ मानिसहरू पनि नसोच्दै दुर्दशामा फेला पर्छन्’ (पद ७–१२)।
निष्कर्ष यही होः अनुत्तरित प्रश्नहरूसहित जिउन सिक्नुहोस्, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्, अनि प्रत्येक दिनलाई सक्दो उपयोग गर्नुहोस्। खुशी रहनका लागि बाइबलीय सूत्र यही हो।
आत्मिक भोजनः गुरुत्वाकर्षणलाई चुनौती २ राजा ६:१–७, मत्ती १४:२२–३३
« एनविसिविएस्‌को छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
तपाईंले के हेर्नुहुन्छ, होसियार बन्नुहोस् »